बुद्ध भूमि हुनुको आर्थिक पक्ष | गृहपृष्ठ
Home प्रडक्ट समाचार बुद्ध भूमि हुनुको आर्थिक पक्ष
on: १७ बैशाख २०७५, सोमबार १०:१५ प्रडक्ट समाचार
मदन लामिछाने/दुर्गा लामिछाने
नेपालले गौतम बुद्ध जन्मभूमि भएको तथ्यबाट पर्याप्त लाभ उठाउन नसकिरहेको गुनासो धेरैले गरेको पाइन्छ । नेपालले बौद्ध शिक्षा, पर्यटन, बौद्ध सामग्रीलगायतको व्यवसायबाट आफूलाई समृद्घिको बाटोमा अगाडि बढाउन सक्नु पर्ने हो । नेपालले बुद्धलाई मार्केटिङ गर्न नसकेको ओशो तपोवन इण्टरनेशनल कम्युनका संस्थापक स्वामी आनन्द अरुण बताउँछन् । बौद्ध धर्म र दर्शनसँग सम्बन्धित शिक्षा, पर्यटन, व्यापार तथा व्यवस्थापनका माध्यमले देशको आर्थिक मात्र नभएर समग्र समुन्नतिमा निकै उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ । पर्यटन र बौद्ध धार्मिक सामग्रीको व्यवसाय यसमा सजिलै देखिने उदाहरण हुन् । सामान्य प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था र व्यवसायिक व्यवस्थापनमा बौद्ध सिद्धान्तहरू अनुशरण गर्न सकियो भने त्यसबाट कैयौं गुणा थप लाभ पाउन सकिन्छ ।
बौद्ध सामग्रीको व्यवसाय बढ्यो
केही वर्षदेखि नेपालमा बुद्धसँग जोडिएका वस्तुहरू (थाङ्का, मूर्ति, तिब्बती सिङ्गिङ बाउललगायत)को व्यवसाय बढेको छ । नेपाली मौलिक शैलीका बुद्ध मूर्तिको उत्पादन तथा विक्री बढिरहेको सम्बन्धित व्यवसायी बताउँछन् । घरमा सजाउने प्रयोजनका लागि भने चीनबाट आयातित मूर्ति पनि विक्री हुने गरेको छ । यसले समग्र मूर्ति व्यवसायमा केही असर गरे पनि हातले बनाइएका, नेपाली मौलिक कला भएका मूर्तिको माग तथा निर्यात भने बढिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । त्यस्तै, थाङ्का व्यवसायमा अधिकांश बौद्ध धर्मावलम्बीको संलग्नता छ । २ वर्षयता थाङ्काको व्यवसाय ३० प्रतिशत बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । थाङ्का कलात्मक उत्पादनको व्यवसाय हो । नेपाली थाङ्काका मुख्य ग्राहक विदेशी पर्यटक नै हुने गरेका छन् । हाल स्किल, पेपर, तिब्बती, तेल पेण्टिङलगायत विभिन्न प्रकारका थाङ्का नेपालमा उत्पादन हुने गरेको छ । हातैले बनाइने भएकाले थाङ्काप्रति विदेशीको आकर्षण बढेको हो । थाङ्काको उत्पादन तुलनात्मक रूपमा नेपाल र तिब्बतमा बढी हुन्छ ।
थाङ्कालाई विभिन्न अवसरमा उपहार दिन पनि प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले, नेपाल आउने पर्यटकले मात्र नभई विदेश जान लागेका नेपालीले समेत थाङ्का खरीद गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । अहिले सबैभन्दा बढी स्पेन, अमेरिका, इटाली, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड, सिङ्गापुर, बेलायत, मलेशिया, ताइवान, भारतलगायत मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा थाङ्काको माग हुने गरेको छ ।
नेपालमा उत्पादन हुने थाङ्कामा पञ्चबुद्ध, मञ्जुश्री, शाक्यमुनि, हरिततारा, कालचक्र, मण्डला, गणेश, कुमार, शिव–पार्वतीको लगायत चित्र अङ्कित गरिएको हुन्छ । तिब्बती शैली र धार्मिक परम्पराका चित्र पनि नेपाली बजारमा उपलब्ध थाङ्कामा भेट्न सकिन्छ । नेपाली बजारमा विशेषगरी तामाङ, शेर्पा र अन्य बौद्ध धर्मावलम्बी कलाकारले कोरेका थाङ्काको बाहुल्य छ । पछिल्ला वर्षमा घर सजाउनेदेखि धार्मिक कार्यका लागि थाङ्काको प्रयोग बढेको छ ।
नेपालमा बौद्ध शिक्षा परम्परागत र सामान्य गरी दुई तरीकाबाट सञ्चालनमा छ । परम्परागत प्रणालीअन्तर्गत बौद्ध विहारले दिने शिक्षा पर्दछ । यसमा पनि विद्यालयका रूपमा सञ्चालित औपचारिक शिक्षा एक हो । यस्ता विद्यालयले बौद्ध दर्शनका साथै समयसापेक्ष शिक्षा पनि प्रदान गर्दछन् । त्यस्तै, अर्कोतर्फ विहारहरूले विभिन्न समयमा केही दिन, हप्ता तथा महीनाका विशेष शिक्षाका कार्यक्रम (शिविर)समेत सञ्चालन गर्दछन् । यस्ता शिविरमा देश–विदेशका बौद्ध धर्मावलम्बीका साथै जिज्ञासुहरूको समेत उल्लेख्य सहभागिता रहन्छ ।
त्यसैगरी सामान्य शिक्षाअन्तर्गत विद्यालय, विश्वविद्यालयले दिइरहेका शिक्षा पर्दछ । यस्ता शिक्षामा बौद्ध इतिहास, बुद्ध धर्म तथा दर्शन, बौद्ध कला, साहित्य, वास्तुकला, प्रतिमा विज्ञान, सङ्ग्रहालय विज्ञान, पुरातत्त्व विज्ञान, मण्डला, बौद्ध सम्पदा, बौद्ध परम्पराजस्ता विषय पढाइन्छन् । बौद्ध शिक्षाकै लागि २०६१ सालमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । त्यसभन्दा ३ वर्ष अघिदेखि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केन्द्रीय विभागमार्फत बौद्ध शिक्षा दिइरहेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि अलग्गै विभागमार्फत यो विषयको अध्ययन–अध्यापन हुँदै आएको छ ।
यहाँका विश्वविद्यालयमा नेपालका मात्रै नभई अन्य देशका विद्यार्थी समेत पढ्ने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बौद्ध अध्ययन विभागका वसन्त महर्जनले बताए । ‘बुद्ध र बुद्ध धर्मप्रतिको उत्सुकताका संसारभर नै छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमै पढ्न आउनेमा भने भुटानका विद्यार्थी बढी छन् ।’
There are multiple benefits. Let’s promote Lumbini Tourism. Let’s promote Buddhist Sites in Nepal.